Ama-cutterhead Dredges Aqala I-Altamira Port Dredging Project - i-Ellicott Dredges
Isikhumulo semikhumbi sase-Altamira esifundeni saseTamaulipas, eMexico, singenye yamachweba amane amakhulu eMexico. I-Altamira iyingxenye yezinhlelo ezinkulu zezimboni ezinikezelwe zezinto ezinjenge-LNG, i-petrochemicals, izingxenye zezimboni, nezimpahla.
Okwamanje, ama-Ellicott dredges amabili ayasebenza noma asezoqala iphrojekthi yokwehlisa itheku e-Altamira. I-Ellicott Series 670 Dragon® dredge njengamanje isetshenziselwa ukwenza ukugcinwa okujwayelekile kusiteshi sokuzulazula nokufinyelela kwesikhungo esizimele sezimboni. Eqinisweni, i-cutterhead dredge esezingeni eliphakathi nendawo iqukethe ipompo eyi-14 "x14" enamandla afakwe ngokuphelele angu-800 HP (597 kW). I-dredge nayo iyakwazi ukumba kuze kufike ku-42 ft (12.80 m). Le dredge eguquguqukayo iyakwazi ukuphatha izicelo ezahlukahlukene zokwehlisa, kufaka phakathi amachweba, amachweba, kanye namaphrojekthi wokulungiswa kwamanzi emaphakathi nezwe.
I-670 isanda kujoyinwa yi-Ellicott Series 1270 Dragon® dredge, ezosetshenziselwa ukunweba esinye isiphetho sezimboni ezizimele e-Altamira. I-Ellicott 1270 enamandla ifaka iphampu eyi-18 "x18" namandla afakiwe esewonke we-1350 HP (1007 kW). I-cutterhead dredge enkulu iyakwazi ukufinyelela ekujuleni okumba kuze kufike ku-50 ft (15 m).
Ngomugqa wayo wezindawo ezisezingeni eliphakeme, eziqinile, nezethembekile, i-Ellicott® iyaziqhenya ngokuba neqhaza elibalulekile ekusebenzeni kwesakhiwo setheku i-Altamira.